प्रेस कानुन ल्याउदैछौं, मान्छेहरु हल्ला मचाउँदैछन, अध्यारोमा तरबार नचलाऔं ; मन्त्री बाँस्कोटा – Samatal Online
प्रेस कानुन ल्याउदैछौं, मान्छेहरु हल्ला मचाउँदैछन, अध्यारोमा तरबार नचलाऔं ; मन्त्री बाँस्कोटा
२८ माघ २०७५, सोमबार १७:३६ February 11, 2019 Samatal Online0Comments
बुटवल । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउने गरि ऐन कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको बार्षिक साधारणसभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार नागरिक अधिकारलाई थप बलियो बनाउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाले अहिले सरकारले गरेका हरेक गतिविधिलाई नकरात्मक रुपमा प्रचार गर्ने काम भएको बताउनु भयो । उहाले अहिले मिडियामा कानुनका बिषयलाई लिएर अनावश्यक हल्ला मच्चाउने काम भएको बताउनु भयो । ‘प्रेस कानुन ल्याउदैछौं, मान्छेहरु हल्ला मचाउँदैछन, अध्यारोमा तरबार नचलाऔं’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो । उहाले संसदमा विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको बताउँदै यसले मिडियालाई फाइदा गर्ने बताउनु भयो ।
‘सबै भन्दा बढि माग मोफसलका मिडियाले गरेका हुन, त्यसलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन ऐन ल्याइएको हो ।’ उहाले विज्ञापन ऐनले नेपालको १२ अर्बको विज्ञापनलाई २० अर्बको पुर्याउने दावी गर्नुभयो । उहाले विज्ञापनका बिषयमा भइरहेको आलोचनालाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो ‘भ्रमको शिकारको पहिरनुस हजुर, काग कराउँदै गर्दछ पिना सुक्दै गर्छ ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले ६५ बर्ष पुगेका पत्रकारलाई निवृत भरणको व्यवस्था, सञ्चारग्राम स्थापनाका लागि ७ वटै प्रदेशमा स्थापना गर्न सम्झौता हुनु सरकारको उपलब्धि भएको बताउनु भयो । उहाले नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवि पत्रकारहरुको तलब ५० प्रतिशत बृद्धिको माग गरेकोमा २५ प्रतिशत मात्रै पूरा गर्दा पनि विरोध हुनु अस्वभाविक भएको बताउनु भया े। उहाले विरोध भएपनि सरकारले कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउनु भयो । उहाले आफू पत्रकारिताबाटै आएकाले यसको विकास र मर्मलाई बुझेर कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भयो । उहाले कम्यूनिष्ट सरकारले काम गर्दा अरुलाई पिडा भएकाले त्यसलाई चर्चामा ल्याउनुको अर्थ नरहेको बताउनु भयो । उहाले अब कम्यूनिष्ट सरकार ५ बर्ष मात्रै नभई आउदो चुनावमा पनि जनताकोमन जितेर चुनाव जित्ने बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले संघियता कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले संरचनाको जगलाई बलियो बनाउने गरि मिडियाले बिषय उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाले समृद्धि मूलूकको आवश्यकता भएकाले मिडियाले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गिरीले साना मिडिया बलियो नहुँदासम्म श्रमजिवि ऐन लागू हुन नसक्ने बताउनु भयो। प्रदेश नम्बर ५ का सांसद कमला विश्वकर्माले समाज परिवर्तनमा पत्रकारिताले धेरै काम गर्न सक्ने भन्दै यसको शक्तिलाई सदपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्व सांसद विनोद पहाडीले मूलूक संघियतामा गएपनि प्रेस पास तथा अन्य सेवा लिन कठिन भएकाले समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्ति सञ्चारमन्त्री भएकाले सञ्चार क्षेत्रलाई राहात र सहजता ल्याउने गरि काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाले लुम्बिनी राष्ट्रिय पत्रकारिता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले नेपालको समृद्धिका लागि बजेट निति कार्यक्रम र दीगो विकास लक्ष्यमा विमती छैन भने प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी भए की भएन त्यसमा कलम चलाउन पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि पत्रकारहरुले पनि जिम्मेवार पूर्वक कलम चलाउने बेला आएको बताउनुभयो । उहाले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई तोड्न सबै क्षेत्र लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले पत्रकारिताले समाचार लेख्न र प्रकाशन गर्नुअघि पटक पटक सोँच्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले रुपन्देहीको पत्रकारिता सक्षम रहेको बताउँदै अझै यसको स्तरीयता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनालले पत्रकारिता नागरिकको पहिलो अदालत रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सल्लाहाकार खिमानन्द भट्टराई, नेपाल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेल, लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनका अध्यक्ष एजाज आलम, उत्कृष्ट पत्रकारिता मूल्यांकन समितिका संयोजक डिआर घिमिरे, शैक्षिक पत्रकारिता पुरस्कार मूल्यांकन समितिका संयोजक इन्दिरा अर्याल, लगायतले बोल्दै पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनाउन आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसिको अध्यक्षता, सचिव रामप्रसाद आचार्यको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो ।
साधारणसभाकै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न निकायसँग मिलेर स्थापना गरेको तीन वटा पुरस्कार वितरण गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही र बुटवल उपमहानगरले संयुक्त रुपमा स्थापना गरेको उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार डायलसन अधिकारी र पत्रकार भगवती पाण्डे पुरस्कृत हुनु भएको छ । अधिकारी उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०७३ र पाण्डे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ बाट पुरस्कृत हुनु भएको हो । दुवै जनालाई नगद ५०÷५० हजार, प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको छ । प्रमुख अतिथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो ।
यसैगरि नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही र बुटवल पब्लिकसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको शैक्षिक पत्रकारिता पुरस्कार २०७४ बाट पत्रकार लक्ष्मण पोखरेल सम्मानित हुनु भएको छ । नगद १० हजार सहित सम्मानपत्रले मन्त्री बाँस्कोटा र बुटवल पब्लिकका अध्यक्ष हेमलाल शर्माले संयुक्त प्रदान गर्नु भयो ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी र सल्लाहाकारलाई पनि सम्मान गरिएको छ । नेपाली पत्रकारिताको जगलाई बलियो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले शाखाले सम्मान गरेको हो । पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई, विनोद पहाडी, हरि लम्साल, डिआर घिमिरे, मोहन चापागाई, दीपक ज्ञवाली र शेरबहादुर केसीलाई सम्मान गरिएको हो । यसैगरि प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी अर्जुन ज्ञवाली, दिल साहनी, बसन्त पोखरेल, प. बाबुराम भट्टराईलाई मरोपरान्त सम्मान गरिएको छ । यसैगरि सल्लाहाकारहरु खिमानन्द भट्टराई, माधव नेपाल, नारायण सापकोटा र चेतन पन्तलाई सम्मान गरिएको छ । प्रमुख अतिथि मन्त्री बाँस्कोटा र महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसिले सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभयो ।
← नेपाल कम्यूनिटि डेभलोपमेण्ट बैँकको २० औं शाखा कलौनिमा
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड चार लेनः निर्माण सम्पन्न हुने साढे तीन बर्ष लाग्ने →
यसरी निर्माण कार्य हुदै छ धरहरा
९ मंसिर २०७५, आईतवार ०७:२६ Samatal Online 0
११ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:०८ Samatal Online 0
२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १५:५९ Samatal Online 0